Yan Aung: အနှေးအမြန် ၀ိရောဓိ ပြဿနာ
ဒီ ၃-၄ ရက် အလုပ်နည်းနည်းများသွားလို့ ပို့စ်အသစ် သိပ်မရေးဖြစ်ဘူးဗျ. ဒီနေ့ပဲ ရေးစရာတွေ ပြီးသွားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို relax လုပ်တဲ့အနေနဲ့ youtube ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာရိုက်ပြီးရှာရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားလိုက်တော့ ကချင် Favorite လေးက ခေါင်းထဲမှာ ကျန်နေသေးတာနဲ့ “L Sai” လို့ ရိုက်ပြီး ရှာလိုက်ပါတယ်။ အသစ်ကလေးတွေများ တင်ထားမလားပေါ့. တင်ထားပါတယ်ဗျာ. အသစ်တော့ အသစ်ပဲ. ဒါပေမယ့် အဟောင်းကို revised လုပ်ထားတဲ့ အသစ်ကလေးပါ။ “လှည့်ကြည့်ပါဦး” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ကြည့်နေရင်းနဲ့ အတွေးလေးတွေ တစ်ချို့ပေါ်လာတာနဲ့ ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်သွားတယ်ဗျ။ အဲဒီ့သီချင်းလေးက slow လေးနဲ့ စပေါ်လာတာလေ။ သူ့အသံလေးကလည်း ကရုဏာသံပါပါလေးနဲ့ ဆိုသွားတော့ ရင်ထဲမှာ ငြိပြီးကျန်ခဲ့တာ။
ခုအသစ်လုပ်လိုက်တဲ့ ဒီဇိုင်းက remix ပါ။ Techno အငွေ့အသက်နည်းနည်းပါနေတယ်။ ကလို့တော့ကောင်းမယ့်သီချင်းလေးပါ။ ခုလိုမြန်လိုက်တော့ ဘာဖြစ်သွားလဲ။ mood ပြောင်းသွားတယ်ဗျ. ကျွန်တော် video ကို မကြည့်ဘဲ Audio သက်သက် နားထောင်ကြည့်တယ်။ Video ကျတော့ သတိမထားမိဘူးလေ။ ဘယ်လို mood ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ ခုပုံစံမှာ Sai Zee က သူ့ကို ထားသွားတာကို ထားသွားတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့လေးပဲ ဆိုသွားတယ်။ ပြန်လာချင်နေ၊ မလာလည်းရတယ်၊ ငါကတော့ ဒီလို ခံစားလိုက်ရတယ် ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပဲ။ ပေါ့သွားတယ်ပေါ့ဗျာ. ပထမ slow ဆိုတုန်းကတော့ တကယ့်ကို ခံစားကြေကွဲနေတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ပါ။
ဒီတော့ ဘာဖြစ်လဲ။ ကျွန်တော်ဘာတွေးမိလဲ။
နှေးနေတာကိုမြန်လိုက်ရင်၊ မြန်နေတာကို နှေးလိုက်ရင် မတူညီတဲ့ အမြင်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
လူတွေအားလုံး လေးတိလေးကန်နဲ့ လုပ်နေကြတဲ့ အထဲမှာ တစ်ယောက်ယောက်ကများ “ဟေ့. Come on, man! Let’s do it! ဟိုဟာခင်ဗျားလုပ်၊ ဒီဟာကျွန်တော်လုပ်မယ်၊ ဒါလေးကို ဒီလိုလုပ်လိုက်ကြရအောင်၊ ဟိုဟာကိုဟိုလို ပြင်လိုက်မယ်…” ဆိုတဲ့ energetic mood လေးနဲ့ တိုက်တိုက်တွန်းတွန်း လုပ်ပြလိုက်ရင် တစ်ခြားသူတွေရဲ့ mood လည်း ပြောင်းသွားတယ်။ mood ဟာ အရမ်းကို contagious (ကူးစက်တတ်) ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ။ အားလုံးအရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားနေပြီး ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်ကများ အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ လုပ်စရာရှိတာကို မတုန်မလှုပ် မှန်မှန်လေး ဆက်လုပ်သွားနေတာကို တွေ့လိုက်ရရင် သူ့ရဲ့ ငြိမ်သက်မှု အရှိန်ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လာရိုက်ခတ်ပါတယ်။
အလုပ်လျှောက်လွာတွေတိုင်းလိုလိုမှာ ဘယ်လိုပြောတတ်လဲ။ ‘Energetic, can work under pressure, flexible, can work asateam….’ စတာတွေကို ဦးစားပေး ပြောတတ်ပါတယ်။ သူတို့က သွက်လက်တာကို တောင်းဆိုတယ်။ Pressure အောက်မှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် လုပ်ဆောင်နိုင်တာကိုလည်း လိုချင်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်တဲ့ personality ကိုလည်း တန်ဖိုးထားပါတယ်။
၀ိပဿနာမှာကျတော့ ဘယ်လိုပြောလဲ။ သူကကျတော့ အရှိန်ကို လျော့ချခိုင်းလိုက်တာ။ ဒါမှ အချိန်တိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို သတိထားသိမြင်လာနိုင်မယ်လေ။ ကျွန်တော်တို့ အရမ်းကို စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ အချိန်မှာ အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်းလေးရှုလိုက်ပြီး မျက်စိကို ခဏမှိတ်ထားလိုက်တာတို့၊ ဒေါသအရမ်းထွက်နေတဲ့ အချိန်မှာ ၁ ကနေ ၁၀၀ ထိရေလိုက်တာတို့ဟာလည်း အရှိန်ကို လျှော့ချလိုက်တာပါပဲ။ နှေးခြင်းမှာလည်း ကောင်းတဲ့ အချက်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ နှေးတာကိုရော မြန်တာကိုရော လိုသလို အတိုးအလျှော့လုပ်တတ်ဖို့ လိုလာပါပြီ။ အမြဲတမ်းမြန်နေလို့လည်း မရပါဘူး။ အမြဲတမ်းအေးအေးဆေးဆေး လုပ်နေလို့လည်း မရပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရမ်းလည်း တင်းကြပ်လုိ့ မရပါဘူး။ လျော့တိလျော့ရဲ လုပ်လို့လည်း မရပါဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာ နှေးမလဲ၊ ဘယ်အချိန်မှာ မြန်မလဲဆိုတာကတော့ ဘုရားဟောခဲ့သလိုပါပဲ
ကာလံဒေသံ အဂ္ဃံဓနံ တဲ့. အချိန်ကာလနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ကျင့်ကြံရမှာပါပဲလေ…
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်လုပ်နေတာမှားနေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ငါလုပ်နေတာ လောသွားလို့လား၊ ငါသိပ်မြန်နေပြီလားပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်လုပ်နေပါရဲ့နဲ့ သူများတွေဖြစ်သလို မဖြစ်လာရင်လည်း ငါလုပ်နေတာများ သိပ်ကိုနှေးနေပြီလားပေါ့.
အဲ. တစ်ခါတစ်လေကျရင်တော့ ကိုယ်လုပ်နေတာ မြန်နေသလား၊ နှေးနေသလားလို့ မသိနိုင်တဲ့ အခိုက်အတန့်လေးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ. ဘယ်သူမှ မဖောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ လမ်းကို ထွင်ပြီးလျှောက်တဲ့ အချိန်မျိုးမှာပေါ့။ အဲဒီ့ အခါကျရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို ဦးထိပ်ထားပြီး အနှေးအမြန်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ချိန်ဆသွားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ ဆုံလာတဲ့ အခါကျရင်တော့ “အတ္တာဟိ အတ္တာနော. နာထော (မိမိကိုယ်သာ ကုိုးကွယ်ရာ)” လို့သာ မှတ်ယူရပါတော့မယ်။
ကာလံဒေသံ အဂ္ဃံ ဓနံ ဆိုတဲ့ ပါဠိစကားလုံးကို အမှန်ရအောင် ကူညီပေးတဲ့ ကိုသက်နဲ့ ကိုနတ္ထိတို့ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုပြောကြားလိုပါတယ် ခင်ဗျာ...
ကိုရန်အောင် ရေးတဲ့ ပါဠိက မမှန်ဘူးဗျ။ ‘‘ကာလံဒေသံ အဂ္ဂံဓနံ’’ လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ သေချာတာကကတော့ ဦးဇင်းတပါးပါးကို မေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်။
ဟုတ်တယ်ဗျ. ကျွန်တော် သုံးတာ မမှန်ဘူးဆိုတာ သိနေတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း suggestion တောင်းထားတာပါ။ အချိန်ကာလနှင့် အညီ လိုက်လျောညီထွေ ကျင့်ကြံရာ၏ ဆိုတာမှာ ကာလံဒေသံ အထိပဲ ကျွန်တော်သိတယ်။ ကျန်တာက ဧကံသမံလား၊ ဧက္ကံတမံလား မသိတော့ဘူး။ အဂ္ဂံဓနံတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သူ့ရဲ့ မူရင်းအနက်မှာကိုက ဥစ္စာဓန အကြောင်း မပြောထားဘူးဗျာ… ဦးဇင်းတစ်ပါးပါးကို မေးဖို့လည်း source မရှိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ပါဠိလိုစာတွေ ရေးနေတဲ့ ကိုနတ္ထိကိုတော့ မေးထားတယ်။
ကိုရန်ရေ… မြန်မာကတော့ အချိန်ကာလနှင့် အညီ လိုက်လျောညီထွေ ကျင့်ကြံရာ၏ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ “ကာလံဒေသံ အဂ္ဃံ ဓနံ”ကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ပါဠိစာပေမှာ တွေ့ဖူးတာက “၀တ္ထု ကာလံ ဒေသံ အဂ္ဃံ ပရိဘောဂံ” လို့ ၅မျိုး ဆိုတယ်။ “ပစ္စည်း¸အချိန်, နေရာ, တန်ဖိုး, သုံးစွဲမှု”…လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ၀ိနိစ္ဆယလို့ ခေါ်တဲ့ အဆုံးအဖြတ်တွေမှာ သုံးပါတယ်။ ဒီတော့ အဆင်ပြေသလို သုံးပေါ့ဗျာ။
ကျေးဇူးတင်တယ် ကိုနတ္တိရေ. ကိုသက်ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြန်ပြင်လိုက်ပါမယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပါဠိစကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အရမ်းသိချင်တာနဲ့ googe လုပ်ကြည့်လိုက်သေးတယ်။ ဘာမှကျမလာဘူး။ တော်တော်တောင် စိတ်ဓာတ်ကျသွားတယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်လိုက်တော့ ကျလာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ literature ဆုတ်ယုတ်နေသလို ခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာ…